Koonfur Kuuriya: Madaxweynihii xilka laga xayuubiyey oo su'aalo la waydiinayo - BBC News Somali
Koonfur Kuuriya: Madaxweynihii xilka laga xayuubiyey oo su'aalo la waydiinayo
Image caption Taageerayaasha Park Geun-hye oo ku soo xoomay gurigeeda magaalada Seoul markii ay u sii ambabaxaysay xafiiska dawcad oogaha
Madaxweynihii xilka laga xayuubiyey ee Koonfur Kuuriya, Park Geun-hye ayaa dacwad oogayaashu su'aalo ka waydiinayaan fadeexaddii musuqmaasuq ee ay xilka ku wayday.
Ka dib markii ay gaadhay xafiiska dacwad oogayaasha ayay u sheegtay warfidiyeenka in ay "wixii dhacay ka xuntahay".
Park way diiday in arrintan su'aalo laga waydiiyo intii ay haysay xilka madaxtinimada, laakiin markii dambe waxay weyday xasaanadii markii ay garsoorayaasha maxkamadda sare meel mariyeen go'aankii baarlamaanka ee ahaa in dawcwad xil ka xayuubin ah lagu soo oogo.
Waxa suurto gal ah in haatan dacwad lagu soo oogo maadaama sida la yidhi ay haweenay ay saaxiibo dhaw yihiin oo la yidhaa Choi Soon-sil ay u ogolaatay in ay shirkadaha waawayn ee dalka lacago badan kaga qaadato xidhiidhka ay la lahayd madaxweynaha.
Choi waxa qudheeda lagu soo oogay eedo ah laaluush qaadasho iyo musuqmaasuq.
Dacwad oogayaasha ayaa la filayaa in ay kulan dheer oo su'aalo ay ku waydiinayaan la qaataan Park, waxaana suurto gal ah in uu gaadho ilaa habeenimada. Mid ka mid ah qareennadeeda ayaa sheegay in dhakhtar la socdo xaaladeeda caafimaad oo kolba marka ay u soo baxdo daqiiqadaha nasashada uu baadhi doono, maadaama oo buu yidhi "xaaladeeda caafimaad la moodo in aanay fiicnayn".
Salaasadan maanta ah ayaa taageerayaasheedu iskugu soo baxeen gurigeeda oo ku yaal xaafadaha dadka ladani deganyihiin ee magaalada Seoul markii boolisku u sii galbinayeen xafiiska dacwad oogaha oo aan sidaa uga sii fogayn ba, waxaana toos looga tebinayey telefishanka.
Waxay dadku wadhfinayeen calanka Koonfur Kuuriya oo astaan u noqday dhaqdhaqaaqa taageera Park.
"Waxan raali gelinayaa shacabka, si daacad ahna waan uga jawaabi doonaa su'aalaha la i waydiiyo" ayay Park ku tidhi warbaahinta markii ay xafiiska dacwad oogaha.